မက်ဒရစ်တွင်Rascafríaရှာဖွေတွေ့ရှိ | ခရီးသွားသတင်း
မာရီယာ | | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်နှင့်မီတာ ၁၀၀ နီးပါးနီးပါးရှိသော Lozoya ချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်ဝှမ်းတွင်Rascafríaသည်မက်ဒရစ်မြို့အနီးရှိလှပသောအလယ်ခေတ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ယင်း၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများတွင် Casa de Postas အဟောင်း၊ Paular ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ Casa del Guardia de los Batanes၊ ၁၄ ရာစုမှ Casa de la Madera၊ ၁၄ ရာစုမှ Casona ဆေးရုံနှင့် San AndrésApóstolမှစီရင်စုနယ်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းများပါဝင်သည် ၁၉ ရာစု XV ။
Giner de los Ríos Arboretum, Peñalaraသဘာဝဥယျာဉ်နှင့်Valdesquíဘူတာရုံတို့၏နေရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်တင့်တယ်လှပသောအလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒီနေ့Rascafríaကိုငါတို့တွေ့ပြီ! ငါတို့နှင့်အတူလိုက်နိုင်မလား?
Rascafríaသည်မက်ဒရစ်အသိုင်းအဝိုင်း၏အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Lozoya ချိုင့်ဝှမ်းတွင်အမြင့် ၁၁ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးတောင်ပေါ်ရှိအလှပဆုံးကျေးရွာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Rascafría၏သမိုင်းသည်မြို့ပြအလယ်ပိုင်းနှင့် ၂ ကီလိုမီတာအကွာရှိ El Paular ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းသည် ၁၄ ရာစုတွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကတ်တီးယပ်စ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပြီး ၁၅ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်နှင့် ၁၆ ရာစုအတွင်း Castile ၏အန်ရီက IV အင်ပါယာ၊ ကက်သလစ်Monကရာဇ်နှင့်ကားလို့စ် ၁ တို့၏လက်အောက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
1 Paular ဘုန်းကြီးကျောင်း
3 ဖင်လန်နိုင်ငံRascafría Forest
6 San AndrésApóstolက de Rascafría၏ဘုရားကျောင်း
၁၃၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် Juan I ၏ဆန္ဒအလျောက် Castile ၌ပထမဆုံး Carthusian ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူမသေဆုံးခင်တွင်သားဖြစ်သူ Enrique II ကို၎င်းကိုသေးငယ်သည့်ရသေ့တောင်မရှိသောနေရာတွင်၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်နေရာအတိအကျကိုပြောကြားခဲ့သည်။
၁၇ ရာစုမှပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောပန်းချီကား ၅၂ ခုနှင့်ဘုရင်များ၏ချာ့ချ်နှင့် Patio de las Cadenas တို့ပါဝင်သည့် Baroque ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ပန်းချီပြခန်းဖြစ်ပြီးဥရောပတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။
ပုဝါဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့တွင် ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ကျောက်တုံးနှင့်တစ်ဝက်ပတ်ပတ်လည်မုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Puente del Perdónကိုတွေ့ရသည်။ Lozoya မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့သည်။
အကျဉ်းထောင်များ၌အကျဉ်းသားများမည်သို့အပြစ်ပေးခံခဲ့ရကြောင်း၊ အပြစ်မဲ့ပါကသို့မဟုတ် Casa de la Galca သို့ပို့ဆောင်ခံရသည့်တံတားကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည့်ဖော်ပြသည့်ဒဏ္toာရီအား ၄ င်း၏အမည်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Puente del Perdónမှလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဆက်၍ ပိုလိုရီယိုသစ်တောကိုသင်ရောက်ရှိလာပြီးဖင်လန်နိုင်ငံRascafríaသစ်တောဟုလူသိများသည်။ စကင်ဒီနေးဗီးယားသစ်တောများနှင့်အလွန်တင့်တယ်သောကြောင့်၎င်းကိုဤနာမဖြင့်ရရှိသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောမိုးမခပင်ပေါက်များ၊ ချုံပုတ်များနှင့်ထင်းရှုးများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသောဆိပ်ခံတံတားပါသည့်လှပသောရေကန်တစ်ခုကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဘေးတွင် ၁၄ ရာစု La La Casona ဟုခေါ်သောဥယျာဉ်ခြံနှင့်ဥယျာဉ်ရှိအဆောက်အအုံတစ်ခုရှိပြီးထိုအချိန်တွင်ဆေးရုံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အလယ်ဗဟိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကနေနီကိုဒူစတိုင်အဆောက်အအုံRascafría Town Hall ကိုရောင်စုံအုတ်များဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။
San AndrésApóstolက de Rascafría၏ဘုရားကျောင်း
အပြင်ပန်းပေါ်တွင်တည်ငြိမ်စွာကြည့်။ မြင်နိုင်သောဤဗိမာန်တော်သည် ၁၅ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကုန်းပြင်မြင့်အတွင်းပိုင်းများအတွက်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ San AndrésApóstolဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ၁၅၆၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်၌ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ စပိန်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြီးနောက်၎င်းသည်လက်ရှိပုံပန်းသဏ္inာန်ဖြင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများစွာကိုခံယူခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ခရီးသွားလုပ်ငန်း » မက်ဒရစ်တွင်Rascafríaရှာဖွေတွေ့ရှိ